Al Shabaab oo la wareegtay Ceel Waaq | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Al Shabaab oo la wareegtay Ceel Waaq
Wararka ka imaanaya Degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaalyahano aad u hubeesan oo katirsan Al Shabaab saakay dhoor jiho ka weerareen degmadaasi si buuxdana ula wareegeen gacan ku heynteeda.
Dadka deegaanka ayaa ku waramay in saakay aroortii dagaalyahano katirsan Al Shababa gudaha usoo galeen Degmada Ceel Waaq, waxaana degmadaasi si deg deg ah uga baxay ciidankii dowlada iyo masuuliyiintii degmadaasi joogay oo u baxsaday dhinaca Xadka Kenya.
Al Shabaab ayaa howlgalo ka sameeyay qeybo badan oo kamid ah degmada Ceel Waaq, waxaana wararku sheegayaan in Al Shabaab miinooyin ku qarxiyeen xarumo maamulka Degmada Ceel Waaq ku shaqeynayeen iyo goobo kale.
Waxaa sidoo kale Al Shabaab goob fagaare ah isugu keeneen dadka ku dhaqan Degmada Ceel Waaq Khudbadana u jeediyeen, waxa ayna shacabka uga digeen la shaqeynta dowlada iyo sidoo kale Ciidamada Kenya.
Waa weerarkii Labaad Al Shabaab kula wareegeen degmo kutaala gobolka Gedo mudo isbuuc ah, waxaana weerarkan kusoo aadayaa xili Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe howlo shaqo u joogo gobolka Gedo gaar ahaan Degmada Balad Xaawo.